Pyae Phyo (MMiTD): May 2015
♪ လူသုံးအများဆုံး Viber အသစ်ထွက်လာပါပြီ - Viber v5.4.0.2519 Apk (28-May) ♫
မနေ့ကမှနောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ Viber Version အသစ်လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ Viber ဆိုတာ ကတော့ ဖုန်းတိုင်းလိုလိုမှာရှိနေပြီးသားဖြစ်ပြီး ဖုန်းနဲ့အင်တာနက်အသုံးပြုသူတိုင်း သုံးတက်ကြတဲ့ Apk တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ အခုအသစ်ထွက်လာတဲ့ Viber v5.4.0.2519 မှာတော့ Free အသုံးနိုင်မယ့် Sticker များထပ်မံပါဝင်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဗျာ။ Android OS 2.3 နှင့်အထက်ဖုန်းများမှာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါ တယ်ဗျာ။
အမျိုးအစား: Android , Android Application , Viber
စာအုပ်အမည် - မောင်ရေးတဲ့ကဗျာ
စာရေးသူ - ခူးခူး
Posted by Admin@Zar Ni No comments :
အမျိုးအစား: သုတ၊ရသ စာအုပ်များ
Opera browser for Android v29.0.1809.9267 Apk
ဖုန်းထဲမှာ မိမိရှာချင်းတာကို ရှာလိုရမယ့်Opera Browser လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Browser တော်တော်များများကိုသုံးဖူးကြမှာပါ။ ဒီ Browser လေးကတော့ ပိုပိုမြန်မြန်ဆန်တာကိုတွေရပါတယ်။ အင်တာနက်လိုင်းကို အသုံးပြုတဲ့ သူတွေအတွက် ဒီ Opera Browser လေးကို သုံးပြီးတော့ website တွေကို ဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင် data ကိုချုံ့ပေးတဲ့အတွက် တစ်ခြား Browser တွေထက်စာရင် ငွေအကုန်အကျ ပိုပြီးသက်သာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်ဆိုတော့ ဒီကောင်လေးကတော့ ပိုမြန်ဆန်လိုပေ့ါဗျာ။ ဒီကောင်လေး၏ဖိုင့်လေးကတော့19.2MB ဖြစ်ပြီး Android OS 4.0 အထက်ရှိဖုန်းတွေမှာသုံးနိုင်ပါတယ်။
အမျိုးအစား: Android Browser
ဖျက်မိတဲ့ Data တွေကို ပြန်ရှာနိုင်မယ့် EaseUS Data Recovery Wizard8.5
အမည် - EaseUS Data Recovery Wizard 8.5
အမျိုးအစား - Data Recovery Software
Password - ask4pc.net (or) ask4pc.blogspot.com
Finger Print ပါတဲ့ Samsung ဖုန်းတွေမှာ App တွေကို မိမိလက်ဗွေနဲ့ ပိတ်နည်း
FingerPrint ပါဝင်သော စမ်ဆောင်းဖုန်းများ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ Apps များကို မိမိလက်ဗွေစနစ်ဖြင့် ပိတ်ထားနိုင် ။
''' မိမိဖုန်းကို လက်ဗွေစနစ်ဖြင့် အရင်ဆုံးလော့ချလိုက်ပါ '''
ပြီးရင် မားကပ်မှ FingerSecurity ဆော့ဝဲထဲကို ဒေါင်းယူပြီး ဖွင့်လိုက်ပါ ။
ဖုန်းထဲကနေ ဓာတ်ပုံတွေကို ပြုပြင်ရာမှာ အကောင်းဆုံး application လေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ PhotoWonder v3.4.3 ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
PhotoWonder ကိုတော့ အားလုံးလည်း သိကြမှာပါ
ဒီကောင်လေးက မိမိတို့ photo မှာ effect တွေထည့် frame တွေတပ်ပြီး အလှဆင်နိုင်သလို အသားညိုတဲ့ သူတွေအတွက်လည်း မိမိတို့ရဲ့ photo မှာ အသားဖြူဖွေးသွားအောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်
တစ်ခြားသော features တွေလည်း အများကြီးရှိသေးတာမို့ ကိုယ်တိုင်သာ စမ်းသုံးကြည့်လိုက်ပါ
file size 34.1MB ရှိပြီး android 2.3 ကစပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်
● Filter Camera: With real-time effects, it can help to take artistic photos!Filter camera can provide classic effects and makes it easier for you to take beautiful pictures.
● Effects: Enhancing photos with all kinds ofcool effects, PhotoWonder makes your photos in the highest quality.
A great many simple or complex frames foryour selection.
What's New3.4.3.1 Updates:
1. Full automation to enlarge your eyes
2. Fire up your social network by boiling your own chick soap for the soul
PhotoWonder v3.4.3 ကိုအောက်မှာ Free Download ရယူနိုင်ပါတယ်
Download Link သုံးခုပေးထားပါတယ် အဆင်ပြေမဲ့ Link တစ်ခုကနေ ဒေါင်းယူပါ
ပိုစ့်အသစ်တင်တိုင်း Facebook ကနေ ယူချင်တယ်ဆိုရင် ဒီမှာ Like နှိပ်ထားခဲ့လိုက်ပါ
Posted by တိုး တိုး
အမျိုးအစား: Android applications , Android Photo Editor , Android photo effect , Photography
♪ Galaxy S6 ကို Root ဖေါက်နည်း ♫
Galaxy S6 ကို Root ဖေါက်ချင်သူများအတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်..
ကွန်ပျူတာမလိုပါဘူး PingPongRoot Apk လေးကို Install လုပ်ပြီး Run ပေးလိုက်ရုံပါပဲ..။
Step 1. Download the PingPongRoot file here .
Step 2. Now you will see the pingpongroot_beta2.apk file, move the file on your Galaxy S6 internal memory.
Step 3. Open the file manager on your phone and install the download apk file on your phone.
Step 4. Open up the app and then hit the “Get Root!” button.
Step 5. If prompted for app permissions, allow them and continue.
Step 6. Once finished, make sure run “Kinguser” app at least once, and change the permission of any application you want to “Allow” if necessary.
source : www.xda.com
အမျိုးအစား: Android , Android Root Tool , How to Root
♪ ဖုန်းမှာ Music & Video တွေကိုကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်မယ့် - KMPlayer Pro v1.1.0 Apk (28-May) ♫
KMPlayer ဆိုတာကလည်း နာမည်ကြီးပြီး လူသုံးများနေတဲ့ Player တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ May-28 ရက်နေ့ ကမှအသစ်ထွက်လာတဲ့ Version အသစ်လေးပါ။ အခုအသစ်ထွက်လာတဲ့ Version လေးမှာတော့ Floating Screen ဆိုတဲ့ Feature လေးတစ်ခုကတော့ ဗီဒိယိုကြည့်နေရင် ကြည့်နေတဲ့ Screen ကို Home Page သို့ Floating Screen အဖြစ်ရွှေ့ပြောင်းထားနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ အခြားသော Feature ပေါင်းများစွာပါ ၀င်ပါသေးတယ်ဗျာ။ Android OS 4.0 နှင့်အထက်ဖုန်းများမှာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
အမျိုးအစား: Android , Android Player
♪ Advanced System Optimizer 3.9.2727.16622 + (Patch & Keygen) ♫
အခုကျွန်တော်မျှဝေပေးချင်တဲ့ Software လေးကတော့ Advanced System Optimizer လို့အမည်ရတဲ့ Software ကောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ မိမိရဲ့ကွန်ပြူတာကိုအရင်ကထက်ပိုပြီး ပေါ့ပါးသွက်လက်လာ မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ မိမိမှာကွန်ပြူတာရှိနေပြီဆိုရင်တော့ ဒါမျိုးကရှိကိုရှိထားသင့်တဲ့ Software လေးပါ။ သူ့မှာ Tools ပေါင်း 30ကျော်ပါဝင်ပါတယ်။ အားလုံးကလည်း အသုံးတည့်မယ့် Tools တွေချည်းပါဘဲ။ ဒီကောင်လေးက PC ရဲ့ System ကို Control လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ PC ရဲ့Speedကိုလည်း မြှင့် တင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ မှားဖျတ်မိတဲ့ Data တွေကိုလည်း Recovery လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အခြားသော Function ပေါင်း 30ကျော်ပါဝင်ပါတယ်ဗျာ။ သူ့ရဲ့ Function တွေကိုတော့ အောက်မှာ အသေးစိတ်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ Full Version အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်အောင် Patch File & Keygen ကိုပါထည့် သွင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
အမျိုးအစား: Optimizer Tools
အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ Dumpster ဆိုတဲ့ application လေးကိုတော့ android ဖုန်းသုံးတဲ့သူတိုင်း installed လုပ်ထားသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်
ဒီ Dumpster လေးက ဘာတွေကို လုပ်ပေးလဲဆိုရင် မိမိတို့ဖုန်းထဲမှာရှိနေတဲ့ photo တွေ mp3 သီချင်းတွေ mp4 video တွေ zip ဖိုင် rar ဖိုင် doc ဖိုင် အစရှိတာတွေကို မိမိကမှားပြီးတော့ ဖျက်မိတယ်
အဲ့ဒီလိုအခါမျိုးမှာ ဒီ dumpster ဆိုတဲ့ application လေးထဲကို ဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင် ခုနက မှားပြီးဖျက်မိတဲ့ ဖိုင်တွေကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး restore လုပ်ကာ ပြန်လည်ရယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်
ဒါဆိုနောက်တစ်ခါ ဖိုင်တွေကို delete လုပ်တဲ့အခါမှာ မှားမှာကို စိုးရိမ်စရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့ဗျား
ဒီ application လေးကို root မရှိတဲ့ ဖုန်းတွေမှာလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် file size 4.9MB သာရှိပြီး android 2.2 ကစပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်
No need to root your device and even
Internet connection is absolutely not required!
✔ Restore deleted pictures, music files, videos and pretty much almost any file type(pdf, mp3, doc, avi, mp4, jpg, png, rar, ogg, txt and many more)
✔ Swipe images and videos inside folders!
✔ fixed translations
Version : 1.1.117.5427
Dumpster v1.1.117.5472 ကိုအောက်မှာ Free Download ရယူနိုင်ပါတယ်
Posted by တိုး တိုး No comments :
အမျိုးအစား: Android applications , Android backup , Android recycle bin , Productivity
Location: Loikaw, Republic of the Union of Myanmar
Android Application တွေ Game တွေကို ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ အသုံးပြုနိုင်၊ ဆော့နိုင်မယ့် YouWave Android Emulator Home v3.21
အမည် - YouWave Android Emulator Home v3.21
အမျိုးအစား - Computer Software, Development Software
♪ Colorfly G708 Tablet ♫
GSM, WCDMA နှင့် Ooredoo မိုဘိုင်းဆင်းကတ် ထည့်သွင်း အသုံးပြုနိုင်သော Colorfly အမှတ်တံဆိပ် G708 မော်ဒယ် Tablet ဖြစ်သည်။ စကရင်အရွယ်အစား ၇ လက်မရှိပြီး Resolutionအနေဖြင့် 1280 × 800 ကိုအထောက်အပံ့ ပေးထားသည်။
RAM အနေဖြင့် 1GB ပါဝင်သည်။ Octa Core 1.3 GHz CPU ထည့်သွင်း အသုံးပြုထားပြီး Storage Memory အနေဖြင့် 8GB ပါဝင်သည်။ Micro SD Card ဖြင့် 16 GB အထိ ထပ်တိုးအသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ Android v4.4.2 OS ကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုထားသည်။ Dual Camera ပါဝင်သည့်အတွက် မိမိစိတ်ကြိုက် ဓာတ်ပုံများကို လိုအပ်သလို ရိုက်ကူးနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
USB, Bluetooth, WiFi စနစ်များကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ တန်ဖိုးမှာ ၉၅,၀၀၀ ကျပ်ဖြစ်ပြီး ဖုန်း - ၀၁- ၃၈၂၈၆၈ ၌ ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
♪ ယခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင် ဖြန့်ချိမည့် Android M ကို Google မိတ်ဆက် ♫
Google သည် နှစ်စဉ်ကျင်းပနေကျ developer conference တွင် Android M operating system သစ်ကို မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
Android M ကို ယနေ့တွင် prerelease ဗားရှင်းအဖြစ် ဖြန့်ချိသွားမည် ဖြစ်ပြီး ယခုနှစ် နှောင်းပိုင်းမှသာ feature သစ်များစွာ ပါဝင်ပြီး စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ထားသော ဗားရှင်းကို ဖြန့်ချိသွားမည် ဖြစ်သည်။
ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် operating system သစ်အတွက် အခြေခံကျသည့် အရာများကို တည်ဆောက်သွားမည် ဖြစ်ပြီး platform အရည်အသွေးကိုလည်း တိုးမြှင့်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း Google ၏ အကြီးတန်း ဒုဥက္ကဌ ဆန်ဒါပီချိုင်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
Android 5.0 Lollipop တွင် ဒီဇိုင်းသစ်နှင့် interface သစ်များ မိတ်ဆက်ခဲ့သလို Android M တွင်လည်း software သုံးစွဲမှုနှင့် တည်ငြိမ်မှုတိုးတက်မှုရှိစေရန် ဖန်တီးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Android M ၏ ပြောင်းလဲမှုများအနက် အကြီးမားဆုံးပြောင်းလဲမှုမှာ app များကို ခွင့်ပြုချက်ပေးသည့် စနစ်ဖြစ်သည်။ သုံးစွဲသူများသည် ကင်မရာသို့မဟုတ် တည်နေရာပြသော app များကိုလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ခွင့်ပြုချက်များအား approve သို့မဟုတ် deny ပြုလုပ်နိုင်သည်။
Android M တွင် ပါဝင်သော Chrome browser တွင် app များကို ပြောင်းစရာမလိုအပ်ဘဲ developer များ ရေးဆွဲထားသည့် app မှတစ်ဆင့် webview ကြည့်ရှုနိုင်သော Chrome Custom Tabs feature ပါဝင်လာမည် ဖြစ်သည်။ Android ၏ built-in app linking system ကို အဆင့်မြှင့်တင်ထားပြီး အီးမေးလ်အတွင်းရှိ Twitter link ကိုနှိပ်ပါက Twitter app ကို တိုက်ရိုက်ဖွင့်ပေးမည် ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် Android M သည် Android Pay ဟု အမည်ရသည့် ငွေပေးချေမှု စနစ်သစ်နှင့် အားသွင်းရာတွင် ပိုမိုလွယ်ကူမြန်ဆန်လာမည့် USB Type-C ထောက်ပံ့မှုကိုလည်း မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
♪ Facebook v36.0.0.0.42 Apk (27-May) ♫
မနေ့က (27-May) မှာ အသစ်ထွက်လာတဲ့ Facebook Version တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ အခုအသစ် ထွက်လာတဲ့ Version ကတော့ အရင် Version အဟောင်းထက် သုံးရတာပိုပြီး ပေါ့ လာသလိုပဲဗျာ။ ကြည့် လို့လည်းပိုကောင်းလာပါတယ်။ Photo တွေ Video တွေလည်း ကွန်နရှင်သိပ် မကောင်း တာတောင် မြန်မြန်ပေါ်လာတာ ကိုတွေ့ရပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတို့လည်းစမ်းသုံးကြည့်ကြပါဦး။အခုတင်ပေး လိုက်တဲ့ Facebook Apk ကိုတော့ Android OS 4.0 နှင့်အထက်ဖုန်းများမှာ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ Facebook Apk မရှိသူများနဲ့ Version အသစ်အသုံးပြုချင်သူများအောက်က Link မှာဒေါင်းယူသွားနိုင်ပါ တယ်ဗျာ။
♪ ဆိုင်ကယ်အကြမ်းမောင်းပြိုင်ပွဲပြိုင်ရမယ့်ဂိမ်း - Ricky Carmichael’s Motocross v1.1.6 Apk ♫
ဆိုင်ကယ်မောင်းရတာဝါသနာပါသောသူငယ်ချင်းများအတွက် ဆိုင်ကယ်မောင်းရမယ့် Ricky Carmichael’s Motocross ဆိုတဲ့ Game လေးတစ်ခုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ပုံမှန်မြင်တွေ့နေကြဆိုင်ကယ်ဂိမ်းတွေလို မျိုးမဟုတ်ပဲ လမ်းကြမ်းတွေမှာ ဆိုင်ကယ်စတန့်တွေကိုပြိုင်ဖက်တွေနဲ့ယှဉ်ပြိုင်ပြီးမောင်းသွားရမှာဖြစ်ပါ တယ်ဗျာ။ ပြိုင်ပွဲတွေကတဆင့်ထက်တဆင့် ပိုပြီးကြမ်းလာတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ Game ရဲ့ပုံစံကိုနမူနာကြည့် နိုင်အောင် အောက်မှာ Screen Shot တွေရိုက်ပြီးပြထားပါတယ်ဗျာ။ Android OS 3.0 နှင့်အထက်ဖုန်းများ မှာကစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
♪ Screen ပေါ်မှာဓါတ်ပုံလေးတွေကို Slide Show နဲ့ထားနိုင်တဲ့ - Animated Photo Frame Widget + v6.4.0 Apk (25-May) ♫
Phone ရဲ့ Home Screen ပေါ်မှာ မိမိတင်ထား ချင်တဲ့ Photo တွေကို Slide Show လေးတွေနဲ့ Animation တွေ ထည့်ပြီးအလှဆင်နိုင်ဖို့အတွက် Animated Photo Frame Widget v6.4.0 Apk ကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ တချို့ Hand Set တွေမှာ Original ပါတယ်ဆိုပေမယ့် အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ Application လေးကတော့မတူပါဘူးနော် ဓါတ်ပုံတွေအတွက် Photo Frame တွေက လည်း တော်တော်လေးကိုလှပါတယ်။ အခုအသစ်ထွက်လာတဲ့ Version လေးမှာတော့ Animation Photo Frame လေးတွေက အသစ်လေးတွေပါဝင်လာတာကို တွေ့ရပါတယ်ဗျာ။ Install app ပြီးတာ နဲ့ခဏစောင့် ပါ.ပြီးရင် Home -> Widget -> Animated Photo Frame Widget သွားပြီးမိမိထားချင်တဲ့ ပုံကိုဆွဲသွင်း လိုက်ရုံပါပဲ။ အောက်မှာနမူနာပုံလေးတွေ တင်ပေးထားပါတယ်ဗျာ။ Android OS 3.0 နှင့်အထက်ဖုန်းများ မှာစပြီးအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
မောင်ကတော့ နှင်းဆီပန်း နှင်းဆီပန်း ပေးမယ်ချစ်သူ- Rose Live Wallpaper v1.4Apk
Android ဖုန်းကို အသုံးပြုနေကြတဲ့ဘော်ဒါတို့အတွက် ကျမက နှင်းဆီပါမောင် ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားတော်တော် ခေတ်စားနေတယ် ဆိုတော့ အခုဝင်းလှိုင် တင်ပေးလိုက်တာကတော့ "မကို ပေးမယ့် ချစ်လက်ဆောင် နှင်းဆီ Live Wallpaper" လေဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်သူရှိတဲ့ဘော်ဒါတို့အတွက်ဖြစ်ဖြစ် ချစ်သူမရှိပဲ ချစ်သူရှာနေတဲ့ဘေ်ာဒါတို့ဖြစ်ဖြစ် ဒီ "မောင်ကတော့ နှင်းဆီပန်း နှင်းဆီပန်း ပေးမယ်ချစ်သူ" live Wallpaper ပေးပြီး ချစ်စကားလုံးတွေပြောရင် မိမိ ၏ ရင်ခုန်သံတွေ ကိုသူဆီက ရှိနိုင်တဲ့ Live Wallpaper ဖြစ်ပါတယ်။အောက်မှာဒေါင်းလုပ်ယူနိုင်ပြီးနော်။
Home -> Menu -> Wallpapers> Live Wallpapers
အမျိုးအစား: Android Live wallpaper
♪ ဓာတ်ပုံများကို Google Photos Appဖြင့် အကန့်အသတ်မရှိ Cloud ထဲ၌ သိုမှီးထားနိုင်မည် ♫
ယနေ့ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Google I/O 2015 နည်းပညာ ညီလာခံ၌ မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ Google Photos App က အတော်လေးကို ထူးခြားပါတယ်။
Google ဟာ ယခင်ကတည်းက ဓာတ်ပုံဝက်ဘ်ဆိုဒ် Picasa နဲ့ Google+ ရဲ့ Photos ဝန်ဆောင်မှုများကို အများပြည်သူ သုံးစွဲနိုင်ဖို့ ဖန်တီးပေးထားပေမယ့် အထူးတလည် အောင်မြင်မှု မရရှိခဲ့ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် Google+ ဟာ လူမှုကွန်ယက်အဖြစ်မှ ရေစုန်မျောပြီး ရပ်တန့်သွားပြီ ဖြစ်ပေမယ့် ယင်းမှာ ပါရှိခဲ့တဲ့ Photos ကဏ္ဍအား အသွင်ပြောင်း အဆင့်မြှင်ပြီး Google Photos App အနေနဲ့ ဖန်တီးလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ App ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်က ရိုးရိုးလေးပါပဲ။ သင့်ရဲ့ စမတ်ဖုန်း၊ တက်ဘလက်၊ iPad၊ Mac ၊ PC ကွန်ပြူတာ နဲ့ Memory Card စတဲ့ Gadget ပေါင်းများစွာပေါ်မှာ ရှိနေတဲ့ ဓာတ်ပုံများကို Cloud (အွန်လိုင်း) မှာ လုံခြုံစွာနဲ့ စနစ်တကျ စုဝေးသိမ်းဆည်းပေးမယ့် ဝန်ဆောင်မှုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်နေရာကနေ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကို Save လုပ်လိုက်ပြီ ဆိုတာနဲ့ Google Photos App ထည့်သွင်းထားတဲ့ Gadget တိုင်းမှာ အလိုလျောက် Sync လုပ်ပြီးသား ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့ Android ဖုန်းပေါ်မှာ Edit လုပ်ပြီး Save လိုက်တဲ့ ဓာတ်ပုံဟာ သင့်ရဲ့ iPhone ပေါ်မှာ Edit လုပ်ပြီးသားအတိုင်း ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
App ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်များကလည်း အလွန်ကောင်းမွန်ပြီး လူပုဂ္ဂိုလ်၊ နေရာဒေသ၊ ပါဝင်သည့် အရာဝတ္ထုများအလိုက် စုဝေးသိမ်းဆည်း ပေးထားနိုင်ပါတယ်။ App အား အသုံးပြုရာတွင် ဓာတ်ပုံများအား နေ့၊ လ၊ နှစ်အလိုက် စုစည်းပေးထားနိုင်သလို ရှာဖွေမှု (Search) ပြုလုပ်ရာမှာ ဓာတ်ပုံနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာ (သို့) အရာဝတ္ထုနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့် ရာပေါင်းများစွာသော ဓာတ်ပုံများထဲက သင် Coca Cola သောက်နေတဲ့ ပုံကို ရှာဖွေလိုပါ Search Box ထဲမှာ “Coca Cola” ဟု ရိုက်ထည့်ပေးရုံနဲ့ ရှာဖွေတွေ့ရှိ နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ MCG မှ စမ်းသပ်မှုအရတော့ ဓာတ်ပုံများကို ကဏ္ဍအလိုက် ကြိုတင် Organize လုပ်ထားမှသာ သက်ဆိုင်ရာ ပုံများကို ရှာဖွေနိုင်တာကို တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ ဥပမာ ရန်ကုန်မြို့၏ ဓာတ်ပုံ ၆ ပုံအား Upload လုပ်ပြီးနောက် Search လုပ်ကြည့်ရာ ၁ ပုံသာ ပေါ်လာတာကို တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။
Google Photo App ဟာ Sync လုပ်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံများကို Cloud ထဲမှာသာ သိုမှီးထားမှာဖြစ်လို့ မိမိရဲ့ Gadget ပေါ်မှာ သိုမှီးမှုပမာဏ လျော့နည်းသွားမှာ မစိုးရိမ်ရတော့ပါဘူး။ Cloud ထဲ၌ သိုမှီးထားရှိခြင်းကိုလည်း ပမာဏ အကန့်အသတ်မရှိ ပေးအပ်ထားပါတယ်။
သို့သော်လည်း ယင်းအချက်မှာ အမြင့်ဆုံး 16MP ပုံထွက်နှုန်းရှိတဲ့ ဓာတ်ပုံများနဲ့ 1080p ပုံထွက်နှုန်းရှိတဲ့ ဗီဒီယိုများအတွက်သာဖြစ်ပြီး ပုံထွက်နှုန်း ပိုမိုမြင့်မားတဲ့ ဓာတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယိုများကို သိမ်းဆည်းခြင်းအတွက် လိုအပ်သည့် သိုမှီးမှုပမာဏကို သင်၏ Google Drive ၏ လက်ကျန်ပမာဏအတိုင်းသာ ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ သင်၏ Google Drive ၌ သိုမှီးမှုပမာဏ 4.5 GB ကျန်ရှိသေးလျှင် ယင်းပမာဏ ပြည့်သည်အထိ မိမိစိတ်ကြိုက် ပုံထွက်နှုန်းရှိတဲ့ ဆိုဒ်ကြီး ဓာတ်ပုံနဲ့ ဗီဒီယိုများကို သိုမှီးထားနိုင် ပါလိမ့်မယ်။
Google Photo App ကို Google Play Store ၊ Apple App Store နဲ့ photos.google.com တို့မှတဆင့် download ရယူနိုင်ပါတယ်။
♪ HTC ရဲ့ အလတ်တန်းစား Dual SIM စမတ်ဖုန်းအသစ် Desire 626G+ ♫
ဈေးနှုန်းနဲ့ စပြီးပြောရမယ် ဆိုရင်တော့ HTC ရဲ့ အသစ်စက်စက် စမတ်ဖုန်း Desire 626G+ ဟာ ကျပ် ၂၂၀ ၀၀၀ ဝန်းကျင် (မေလ ၂၈ ရက်နေ့ ဈေးနှုန်းအရ) ကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဈေးနှုန်းနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်မျိုး ရရှိနိုင်ပါ့မလား။ လေ့လာကြည့်ရအောင်။
Desire 626G+ ဟာ 720p HD ပုံထွက်နှုန်းရှိတဲ့ ၅ လက်မအရွယ် မျက်နှာပြင် တပ်ဆင်ထားပြီး ပုံထွက်သိပ်သည်းဆ 294 ppi ရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်မို့လို့ ဝေဝါးမှုမရှိတဲ့ ကြည့်ပျော်ရှုပျော်ရှိတဲ့ ပုံရိပ်များကို ဖော်ပြပေးနိုင်တဲ့ စမတ်ဖုန်း ဖြစ်ပါတယ်။
MediaTek MT6752 1.7 GHz Octa-core ပရော်ဆက်ဆာ၊ Mali-T760MP2 ဂရပ်ဖစ်ပရော်ဆက်ဆာနဲ့ 1GB RAM တို့ ထည့်သွင်းပေးထားတဲ့ Desire 626G+ ဟာ စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းမှာ မဆိုးလှဘူးလို့ ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ နေ့စဉ်သုံး ဂရပ်ဖစ်အပိုင်းနဲ့ ပြိုင်တူလုပ်ဆောင်မှု (Multitasking) များအတွက် လုံလောက်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖုန်းတွင်းသိုမှီးမှုပမာဏက 8GB ပဲရှိလို့ microSD ကဒ် ထည့်ကိုထည့်မှ ဖြစ်မယ့်အခြေအနေ ရှိနေပါတယ်။ microSD ကဒ်နဲ့ 32GB ပမာဏအထိ ထပ်ဆောင်ထည့်သွင်း နိုင်ပါတယ်။
2000 mAh ပမာဏရှိတဲ့ ဘက်ထရီ ထည့်သွင်းပေးထားလို့ 3G ကွန်ယက် ဖွင့်ထားပြီး အသင့်အနေအထား (Standby) မှာ ၄၅၈ နာရီ အထားခံမှာဖြစ်ပြီး 3G ကွန်ယက် ဖွင့်ထားပြီး အသုံးပြုမှုမှာတော့ ၁၂ နာရီကျော် တာရှည်ခံပါလိမ့်မယ်။
ဒီစမတ်ဖုန်းရဲ့ ပင်မကင်မရာကတော့ 13MP ဖြစ်ပြီး Autofocus ၊ f/2.2 Aperture ၊ LED Flash နဲ့ 1080p FullHD ဗီဒီယိုရိုက်ကူးမှုစနစ်တို့ ပါရှိပါတယ်။ ရှေ့ဖက် Selfie ကင်မရာကတော့ ပုံထွက်နှုန်း 5MP ရှိပြီး f/2.8 Aperture နဲ့ 1080p ဗီဒီယိုများ ရိုက်ကူးနိုင်တဲ့ ကင်မရာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပင်မကင်မရာနဲ့ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဓာတ်ပုံများဟာ အရည်အသွေး ကောင်းမွန်ပြီး အလတ်တန်းစား စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးမှာ ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့ စံနှုန်းကို ကျော်လွန်တယ်လို့ ဆိုနိုင်ပြီး ရှေ့ဖက်ကင်မရာကတော့ Skype နှင့် Facebook Messenger ကဲ့သို့ ဗီဒီယိုနဲ့ ဆက်သွယ်မှု App များ သုံးစွဲရန် အလွန်အသုံးဝင် ပါလိမ့်မယ်။
Desire 626G+ ဟာ လက်ရှိအချိန်မှာ Android 4.4.4 KitKat အသုံးပြုထားပြီး HTC ရဲ့ မူပိုင်ဖြစ်တဲ့ Sense UI ကို အပေါ်မှ ထပ်ဆောင်ထည့်သွင်း ပေးထားပါတယ်။ ဆင်းမ်ကဒ် ၂ ကဒ် ထည့်သွင်းသုံးစွဲနိုင်ပြီး 3G ကွန်ယက်များနဲ့ ချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။ White Birch (အဖြူ) ၊ Purple Fire (ခရမ်း) နဲ့ Blue Lagoon (အပြာရင့်ရောင်) ၃ ရောင်နဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။
ကနဦး တွေ့ရှိချက်များအရတော့ HTC Desire 626G+ ဟာ ကျပ် ၂၂၀ ၀၀၀ ဆိုတဲ့ ဈေးနှုန်းနဲ့ “တန်” တယ်လို့ ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ 8GB သိုမှီးမှုပမာဏကလွဲလို့ ကျန် အချက်အလက်များဟာ အလတ်တန်းစား စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်စံနှုန်းထက် မသာလွန်ရင်တောင် မနိမ့်ကျပါဘူး။
ပုံစံဒီဇိုင်းပိုင်းမှာလည်း HTC ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း မူပိုင်ဟန်နဲ့ ထုတ်လုပ်ထားလို့ နှစ်လိုဖွယ်ရာ ရှိပါတယ်။ ဈေးကွက်ထဲမှာ အလားတူ စမတ်ဖုန်းတွေ များပြားနေလို့ ဝယ်ယူတဲ့အခါမှာ ဇဝေဇဝါ ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် HTC ရဲ့ ကွာလတီကတော့ ငြင်းပယ်လို့ မရတာ သေချာပါတယ်။
♪ Facebook က Messenger တွင် သူငယ်ချင်းများ အတူတကွ ဂိမ်းကစားနိုင်ရန် ပြုလုပ်မည် ♫
Facebook Messenger တွင် သူငယ်ချင်းများ အတူတကွ ဂိမ်းကစားနိုင်တော့မည် ဖြစ်သည်။
Facebook က Messenger အတွက် ဂိမ်းများ တီထွင်ပေးရန် Developer များနှင့် ဆွေးနွေးနေသည်ဟု အတည်ပြုပါသည်။ အခြား Apps များမှ Content များကို Messenger တွင် မျှဝေနိုင်သည့် စွမ်းဆောင်ချက် ကိုလည်း မကြာမီက ထည့်သွင်းပေးခဲ့ပါသည်။
Facebook က ပြီးခဲ့သောနှစ်တွင် Messenger ကို Facebook မှ ခွဲထုတ်၍ သီးခြား App အဖြစ် အသုံးပြုစေ ခဲ့ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ခွဲထုတ်လိုက်ခြင်းသည် Video Call စွမ်းဆောင်ချက်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေသည်ဟု Messenger ထုတ်ကုန် ဌာနမှ အကြီးအကဲဖြစ်သူက Mashable ကို ရှင်းပြပါသည်။
Facebook က Messenger အတွက် မည်သည့်ဂ်ိမ်းများ ထွက်ရှိမည်ဆိုသည်နှင့် ဖြန့်ချီမည့် နေ့ရက် အတိအကျကို ကြေညာခြင်း မရှိသေးပါ။
အမျိုးအစား: Facebook ဆိုင်​ရာ , နည်းပညာသတင်း
▼ May ( 368 )
♪ လူသုံးအများဆုံး Viber အသစ်ထွက်လာပါပြီ - Viber v5...
ဖျက်မိတဲ့ Data တွေကို ပြန်ရှာနိုင်မယ့် EaseUS Data...
Finger Print ပါတဲ့ Samsung ဖုန်းတွေမှာ App တွေကို ...
♪ ဖုန်းမှာ Music & Video တွေကိုကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်မ...
♪ Advanced System Optimizer 3.9.2727.16622 + (Patc...
Android Application တွေ Game တွေကို ကွန်ပျူတာပေါ်မှ...
♪ ယခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင် ဖြန့်ချိမည့် Android M ...
♪ ဆိုင်ကယ်အကြမ်းမောင်းပြိုင်ပွဲပြိုင်ရမယ့်ဂိမ်း - ...
မောင်ကတော့ နှင်းဆီပန်း နှင်းဆီပန်း ပေးမယ်ချစ်သူ- ...
♪ ဓာတ်ပုံများကို Google Photos Appဖြင့် အကန့်အသတ်မ...
♪ HTC ရဲ့ အလတ်တန်းစား Dual SIM စမတ်ဖုန်းအသစ် Desir...
♪ Facebook က Messenger တွင် သူငယ်ချင်းများ အတူတကွ ...
♪ Lenovo က ကမ္ဘာ့ ပထမဆုံး Laser Projector ပါတဲ့ စမတ...
♪ စမတ်ဖုန်းကို စက္ကန့် ခြောက်ဆယ်အတွင်း အားဖြည့်ပေးန...
ကျောက်ကွင်းအရေးတော်ပု့အင်တာဗျူး (အသံဖိုင် ဒေါင်းလု...
♪ Video Call အမှန်အကန်ခေါ်လို့ရပြီဖြစ်တဲ့ Messenger...
Youtube က Video တွေကို Download ပြုလုပ်နိုင်မယ့် Y...
Battery Doctor (Battery Saver) v4.22 build 4220065...
အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ Adobe Photoshop CC14
သျှင်ဥက္ကဌ နှင့် ကျောက်ကွင်းအရေးတော်ပုံ(သခင်မြတ်ဆို...
♪ Ooredoo နှင့် Telenor က အင်တာနက် အသုံးပြုခကို အြ...
ဖုန်းကို တစ်ချိန်လုံး ပလပ်ထိုးထားတာ ဘက်ထရီ ပျက်စီး...
♪ Z3+ ကို ကမ္ဘာတစ်ဝန်းထံ တင်ပို့ရောင်းချမည်ဟု Sony ...
♪ မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာ ပညာရှင်အသင်း အသိအမှတ်ပြု...
♪ Google က မိုဘိုင်းဖုန်းမှ ကုန်ပစ္စည်း ရှာဖွေမှုရလဒ...
♪ Mobile Guide Issue Vol-3 ၊ Issue-004 (25.5.15) ♫...
♪ ဖုန်းထဲမှာရုပ်လုံးကြွနေတဲ့ Icon လှလှလေးတွေအဖြစ်ဖ...
♪ ဖုန်းထဲမှာတင် Video တည်းဖြတ်, စာတန်းထိုး, Photo ...
English စာလေ့လာသူများအတွက် (ဝင်းလှိုင်(နည်းပညာ) ၏ ...
♪ NetGuide Journal Vol (3), Issue (86) (27.5.15) ♫...
♪ Sniper 3D Assassin v1.6.1 Apk (unlimited money) ...
♪ သုံးစွဲသူများ အင်တာနက် အခမဲ့အသုံးပြုနိုင်ရန် အင်...
Phonograph Music Player v0.9.11b
♪ ပြည်တွင်းအတွက် HTC ၏ မော်ဒယ်သစ် စမတ်ဖုန်းနှစ်မျိ...
♪ ယခုနှစ်အတွင်း Nexus ဖုန်း နှစ်မျိုးထုတ်လုပ်ရန် G...
♪ အကောင်းဆုံး Android စမတ်နာရီ ဖြစ်လာဖို့ အလားအလာ ...
♪ Huawei က Honor 4C နှင့် Honor Bee တို့ကို အိန္ဒိယ...
♪ Huawei P8 Lite ကို ဥရောပတွင် ရောင်းချ ♫
♪ Android Phone ကို လက်တစ်ဖက်တည်းနဲ့ အသုံးပြုလို့ရ...
♪ Techspace Journal Vol (4), Issue (7) (26.5.15) ♫...
♪ Root ဖောက်ထားတဲ့ ဖုန်းများမှမရှိမဖြစ်ထည့်သွင်းထာ...
♪ မိုဘိုင်းဖုန်း ပြုပြင်ခြင်း နည်းပညာဖြင့် အသက်မွေ...
♪ ယောက်ကျားလေးသီးသန့်သာဒေါင်းယူရန် - Beautybabes 1...
မဲစာရင်းမှာကိုယ့်နာမည်ပါမပါ အွန်လိုင်းက စစ်မယ်
♪ iPhone6Plus ကို အမှီလိုက်လာတဲ့ Xiaomi ရဲ့ Mi N...
♪ HTC One9ရဲ့ အားနည်းချက် ၊ အားသာချက် ၊ နည်းပညာ ...
iPhone သုံးစွဲသူအများစု သတိမထားမိနိုင်သော မှော်ဆန်...
♪ အွန်လိုင်းပေါ်တွင် MPU ကတ်မှ တစ်ဆင့် ဖုန်းငွေဖြည်...
♪ ပါးလွှာသော ဒီဇိုင်းဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသည့် Kenbo Fl...
♪ မည်သည့် မျက်နှာပြင်၌မဆို အသုံးပြုနိုင်သည့် Phree...
♪ ပင်လယ်ရေအောက်ကမ္ဘာမှ ငါးအလှလေးများ - Aquarium Liv...
♪ Facebook Messenger ကို Desktop တွင် အသုံးပြုနည်း...
♪ Sony Xperia A4 ကို ဂျပန်တွင် ရောင်းချ ♫
Effects အလန်းတွေနဲ့ ကပ်/ ဖြတ်/ ညပ် ..။ဗွီဒီယိုလုပ်...
Android Device တွေကို ပေါ့ပါးစေတဲ့- BusyBox v28 Ap...
♪ Android Phone တစ်လုံးမှာအရေးပါတဲ့ - File Manager...
Viber Spy 2
♪ နေရောင်ခြည် စွမ်းအင်သုံး Display နဲ့ Kyocera ရဲ့...
♪ ငလျင်လှုပ်တာကို ကြိုတင်သတိပေးနိုင်မယ့် Earthquak...
♪ မြန်မာနိုင်ငံ တယ်လီဖုန်း လုပ်ငန်းသမိုင်း ♫
♪ ဖုန်းတစ်လုံးမှာဆောင်ထားသင့်တဲ့ - Super Backup Pr...
♪ ဆိုင်ကယ်မောင်းဝါသနာပါသူများအတွက် - City Biker 3D...
♪ Digital Life Journal Issue Vol-4 ၊ Issue4(25.5...
♪ Vivo X5Pro ကို တရားဝင်ကြေညာ ♫
♪ Huawei MediaPad M2 ကို ပြင်သစ်တွင် ပြသ ♫
♪ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် HTC J Butterfly ကို ဂျပန်တွင်...
♪ Gmail အသုံးပြုသူများအတွက် Tips (၇) ခု ♫
Coolpad 7298D error on google acc lock
♪ ပိုက်ဆံတွေနဲ့အရာအားလုံးကို Hack ထားတဲ့ COC - Cla...
ကမ္ဘာလုံး နေလုံးတွေနဲ့ အလန်းစား - Asteroids 3D live...
နှလုံးခုန်နှုန်းကို တိုင်းတာပေးမယ့် Instant Heart R...
ရွှေအိုရောင် Batter Saver လှလှလေးနဲ့apkလေးသုံးမယ်-D...
♪ ကွန်ပျူတာကိုအကြောင်းလေ့လာနေသူများသိထားသင့်သည့် W...
♪ ဖုန်းအချင်းချင်း Data ကူးယူရာမှာလွယ်ကူမြန်ဆန်တဲ့...
♪ ညစ်ညမ်း အကြောင်းအရာများ အတော်လေး ပါဝင်နေတဲ့ မြန်...
♪ Andriodစမတ်ဖုန်းအချို့နဲ့ Samsung:-) HTC တို့၏ လ...
♪ အင်တာနက်မလိုပဲကစားနိုင်မယ့် COC လိုဂိမ်းပုံစံမျိ...